Marqaanmedia|Daily News » Khaatumooy Wixii Jiraaba Cakaaru Imaan!
Khaatumooy Wixii Jiraaba Cakaaru Imaan!
December 26, 2016 - Written by mar - Edited bymar
Waxan Qormadani maanta Waxaan Kusoo qaadanayna wada Hadalada Khaatumo Iyo Soomaliland ee maal mahani danbe Warbaahinta Aadka Looga hadal hayey,Taasi oo Muujinaysey sida dad badani Shaki u galiyeen Inay wada Hadaladani Nimco Iyo barwaaqo wadaan.
Aan horta Idin cadeeyey Buuqani iyo shakiga waxa Keenay Inaysan Umada Horay ula Socon Ayna Marna Ka Filayn madaxweyne Cali khaliif inuu wada Hadalo La Galayo soomaliland Marka laga Eego halka Ay kala taagnayeen hadalada warbaahinta.
Lakin waxa Ilaa Bilowgii khaatumada danbe Soomaliland Sheegaysey inay wada Hadalo u Socdaan cali khaliif Isaguna Wuu in Kirayey wada hadaladasi inayba Jiraan Ilaa Hal mar laga war Helay Caynaba La Wada Jooga..
Soomalida waxay ku maha Maahda “Nabar la Filayey Naxdin malaha”
hadii Horay u sii Ogayeen dadku wada Hadaladani shaki badani ma Imadeen maanta Xataa Hadii lagu biiro ,waayo Wayba Sii Ogayeen lakiin Ninkii loo caynayey Shalay in maanta Loo amaano waa Arinta Shakiga Weyn keentay.
Waxan soo qaadanaya weedha baxday 2 sano ka Hor Uu madaxdii maamulkaasi Bixiyeen qaar ka Mida Oo Ahayd”Khaatumo waxay Kala Noqotay “Khaatumo iyo khiyaano” Dadku khiyaanada waxay u Arkayeen Kuwa Puntland Aadey Lakin kama Filayn weedhaasi mar kale Soo bixi doonto.
Wixii Jiraaba Cakaaru Imaan!
Soomaalida waxay Dhahdaa Guur Iyo geeri ma Qarsoomaan waxaan Ugala Jeeda Shakigani maanta Jira Koley Wuu cadaanaya,waayo hadii Maanta wax la qarinayo malainta laysku biiro ma Qarsoomayso Hadii ay dhacdo.
Lakiin Maalintasi tolow Dadka qaar ma Tageeri Doonaan Inay Ku taagan yahiin Tubtii saxda Ahayd,Mise waxay Ku macnayn doonaan fursad laga Fursan waayey,Anigu Erayga Danbe ayaan u arkaa inay Ku macnaynayaan Hadii ay dhacdo in soomaliland lagu biiro…
maxay sheegi Doonaan Dadka Khaatumo tageeri jirey waliba Halyey Looga Yaqaan maantana tageeraya Wiixi Ay ka dagalamayeen mudo baan waliba Iyagoo Go Weyn dusha Ka saaray Arintani,waxaana filayaa Kalsoonida Beesha Dhulbahante Maalintaasi inay Shaki badani keenayso .
calamadaha Muujinaya Iskuu Biirida
calamadaha Muujinaya Inaysan isku biirayn…
Horta Guud Ahaan Heshiiska aniga iyo dad badan oo ila Mida waxay u fahmeen Isku biirida.
Maamulka la Dedejinaya Waa Khaatumo Ayaan dadka qaar ka maqlay ,Oo hadii khaatumo tahay Mamaulka la dedejinayo maxa Soomaliland ka Galay,Soomaliland waaba Tii laga dagaalamayey Dhulka Laga Kicinayey Ninkaad Qoriga U haysatey Hadaad Qori Weydisato Sow Waali maha..
Dib u Eegid Ciidamada Soomaliland Inay sii joogan Iyo baahi Loo qabo.
Aan idinka Qosliyee Sool, sanaga Iyo cayn ma Cadow Ciidamada Soomailand Ahaynba Jooga Arinta daruuriga Ah Maxay tahay,Dagaal haduu jirana dee Cida Wada hadlaysa Uunbu ka Dhaxeeya,marka Ma Shabaab Ayaa Jooga Dhulka maxay tahay Arinta Dib U eegida Iyo Duruufta La Eegi doono.
ma Rabo inaan Qodobada Ku dheraado lakiin Intaasi oo Qodobada Aan Kasoo qaatay isku biirida cadaynaya.
Qodobo Ku caddayanaya Inaan laysku biiri karin
Hadii xata Madaxda Khaatumo oo dhani ku biiraan Soomaliland waxba Ma Badalayaan,lakiin waxay dilayaan kalsoonida Shacabka Deegaanka Oo hadba Ninkii Ay Aaminaan Uu labada Lugood Goynayo.
waxaysan isku biiri karin Soomaliland Iyadu waa ogtahay magaca Ay ka Leedahay waa Inay dhahdaa Dhulka waqooyiga Anaga Xukuna,Lakiin markaasina Waxa Soo bixi doona Shacab Raali ka Ahayn Soomaliland Oo Qoriga qaadanaya waxayna Ku qas ban tahay Soomaliland mar kale inay kow Kasoo bilowdo wada hadaladani.
Ugu danbayn Aanba Joojino deg Dega Fulow Guuli ku dhawaa,wakhti Dhow waa cadaanaysa Inay isku biirid Jirto iyo in kale lakiin hadad tageersan tahayna Yuusan hadal kaa tagin hadii Aad diidan tahay wada Hadaladani yuusan Hadal ka tagin.
Waa Maqaalo taxane Ah wada hadalada Maamulka Khaatumo Iyo Soomalialnd
FG Ah: Mucaarad ma Ahiye Waxbaan saxayaa
Hadii Aad hayso Aragti Maqaalo Arimahani ka Turjunaya Nooc kasta Yahiin Kusoo Dir
5 Responses to Khaatumooy Wixii Jiraaba Cakaaru Imaan!
Waryaa99 says:	December 27, 2016 at 1:16 am	Labadii qobod ee cadeynayey Isku biirida waad sheegtee mee qodobka aad tiri wuxuu cadeynayaa inan laysku biireyn mise waad ilowday. Ta kale markaad wax qorayso lama noqdo emotional ee waxaa la noqdaa professional.
Ahmed says:	December 27, 2016 at 3:31 am	Horta mid waad ku saxsan tahay oo Khaatumo waxay ku biiri doontaa Somaliland. Ama hasoo dedejiyaan ama ha sii yara cago jiidaane. Waxaan u malaynayaa in ay Doorashooyinka soo socda isku aadin doonaan oo ay maamul daadejintu halkaas ka bilaabi doonaan. Calaashaan dad Khaatumo taabacsan ama ku jira xisbiyada laakiinse khaatumo taageertay (Endorsed by KH or Recomended by KH). Halkaasna ay kasoo baxaan goleyaal dawlad hooseed yaryar oo ka arimiya tuulooyinka iyo magaalooyinka ay Khaatumo sheeganayso. Tan ciidanka, Odaygii Khaatumo dhankeeda ka socday ee la waraystay, anoo soo koobaya jawaabtiisa waxa ku jiray erayadan. Ciidanka waxa loo sameystaa inuu kaa difaaco cadaw dibada kaaga imanaya. Beledkana ciidan dibada kasoo weeraray ma jiraan. Markaas iyada oonay degaamada SSC oo dhan faaruqinayn, waxa laga baaraandegayaa kolka ugu haboon ee xeryahoodii dabiiciga ahaa loogu celin lahaa. Taas macnaheeda oo koobani waa ciidanku ma baxayo oo dhulkiisii ayuu joogaa. Laakiinse Xeryahoodii ay markii horeba degenaayeen ayuu dib ugu noqonayaa isaga oo dhamaan Somaliland oo dhan oo ay ku jirto SSC ka wakiil ah. Hadaan usoo noqdo qodobada aad tidhi israac kuma imanayo. Horta qodobo saaxi ah meesha maad keenin. Laakiinse meelo hoose ayaad ku laabatay. Waayahay. Shaki kuma jiro hadii ay Khaatumo Somaliland ku biirto inay soo bixi doonaan dad imika iyaga la socda oo kasoo horjeedsan doona. Laakiinse taad is diidsiinayso eenad rabin inaad tidhaahdo waa iyada oo kaalin weyni ay banaanaandoonto. Somaliland waxa ay ku macaashaysaa Magaca Khaatumo oo ay soo xero gelisay. Dhowr siyaaboodba wey ugu macaasheysaa. 1. Khaatumo cududeeda ugu weyn ee ay ilaa iyo imika leedahay waa Cabaadkeeda oo dheer oo meel walba laga maqlayo. Khaatumo cudud ciidan ooy ku dagaalantona malaha, karti iyo shacbiyad badana ma laha. Laakiinse wey qaylo dheereyd. SSC iyadu waabay dagaalami jirtaye. Markaas Cabaadkoodii ayaa hadhaya. Taas bedelkeeda inta ay afka kala qaadaan ayay ku digriyi doonaan in ay meel walba soo taabteen oo Somaliland wax u dhaama ay waayeen. Intii aanan dhegaha ka furaysanina boqol goor ayay maqli doonaan. Aduunkoo dhana wey gaadhi doontaa. 2. Qalbi jab weyn oo ku dhici doona inta iyagu aanan jecleyn Somaliland. Xitaa haday is yidhaahdaan dib meel hoose wax uga soo yagleela uma suurtoobi doonto waayo aad iyo aad ayay u adagtahay in dad niyad jabsani iyagu hoosta Jabhad kasoo yagleelaan. Ina ku dhiirata ee yagleela is tidhaahdaana wey ku adkaanaysaa in ay taageero ka helaan shacbiyad niyad jabsan. Xitaa haday inyar isla helaan taagtooda iyo tabartooduba wey kasii liidan doontaa tan Khaatumo oonan waxbaba is la heyn. Cabaadna waxa kasii liita waynu garanayaa oo waa baroorasho. Rag googarado iyo duruuc inay soo xidhaan baroortana waxa ay inagu noqon doontaa xaajo ugub ah. Laakiinse anigu waxa aan leeyay kii is leh wey kuu maraysaayoow baroortu waa kuu furantahay. 3. Somaliland waxay khaatumo ku bahdishay waa cudud ciidan. Geed walba ooy fadhiista is yidhaahdeen wey ka eriday. Waxa ay u diiday inay jaanta iyo jiibta isla helaan. Meel ay salka dhigtaana waa heli waayeen. Takale ee ay ku bahdishay waa iyada oo u weydaaratay beelihii dhulbahente heshiishoyona la gashay. Khaatumo cabaadkii u weynaa taas ayaa ka keentay. Waarbal iska kaaya caydhsada anaga ee dadkuun noo daaya leeyihiin. Ta ugu weyn ee hadalka ku qasabtayna waa taas. Waxa ay ka hoos siibtay waxay Khaatumo ku andacoon jirtay oo aheyd dadkayagaa na taageersan. Degaankii oo ay ka heysato ayay kaga darsatay in dadkiina in badan ka xantoobsato. Macaashka tan kujiraa waa marka ay Somlailand soo xero geliso Khaatumo waxa sii kordahaya dadkaas ay markii horeba la heshiisay oo Somaliland aad usii taabici doona. Taabacaadaasina waxa ay sii shiiqin doonta qolyaha kale ee wax yagleela is yidhaahda oo waayi doona cududii aya ka heli lahaayeen ugu yaraan qalbiga dadkaas. Aan soo gabo gabeeyee, Khaatumo oo Somaliland u guryo gashaa Somaliland inay wax usoo kordhiso mooyaane waxba kama dhimayso.
jaamac🇸🇴 says:	December 27, 2016 at 4:39 am	Horta Ma Cali khalif baa snm ku biiraya mise shacabka Khaatumo ? Cali khalif waa shakhsi siyaasi ah meeshuu doonuu aadikara laakiin shacabka khaatumo 100% waxay aaminsan yihiin qadiyada Somaliya . Qabiilna qabiil kale kuma khasbikaro wuxuu isagu rabo . Cali haduu jabouti ku biiro ama Ethiopia waa mid isaga Uun saameyneysa laakiin yaan la ilaawin kitaabkii lagu dhaariyey ee ahaa inuu shacabka khaatumo ugu adeego waxay ku jirto qadiyada Somaliya iyo qarankeena Somaliya .
jaamac🇸🇴 says:	December 27, 2016 at 4:42 am	Waxaan aaminsan sanahay kooxda hargiesa iyo burco in ay ku biirayaan Dalkeena Somaliya iyadoo Dee dhulkaas degan yihiinba Somaliya leedahay juquraafi ahaan , waxaana ku cadeyneysa inuu ciro la kulmay raysalwasaaraha dalka kana wada Hadleen doorashooyinka sanadka 2016 . Snm 26 sano been iyo huuhaa ku noolayeen waxaad mooda hada in ay xaqiiqda fahmeen ogadeena in Somaliya taako yar Ka go,ayan
Ahmed says:	December 27, 2016 at 8:53 am	Qof walbaaba waxa uu soo qorayo waa u fasax laakiinse marka aad maqaaladan oo kale akhrisataan waa la’idiinka baahan yahay falanqeyn aad falanqeysaan mawduuca laga hadlayo. Qodobada aad soo daliishadaana waa inay saafi ahaadaan.